Wararka ugu dambeeyay ee laga helaayo shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararka ugu dambeeyay ee laga helaayo shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe (AKHRISO)
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in maanta uu dib u dhac ku yimid shirkii maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, kaas oo lagu waday inuu maanta dib uga furmo halkaas.
Dib u dhaca shirkaasi ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii ay imaan waayeen wufuud laga sugaayay magaalada Muqdisho oo shirkaasi ka qeyb-gali lahayd, waxaana sidoo kale magaalada Jowhar ka maqan gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Guudlaawe oo haatan arrimo farsamo ugu maqan magaalada Muqdisho.
Shirkaasi ayaa la sheegayaa inuu dib u furmi doono maalinta Isniinta ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 5-ta bishaan September, iyoodana dowladda federaalka Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD uu qorshohoodu ahaa in shirkaasi uu maanta furmo balse aysan dhicin.
Dhinaca kale, waxaa aad loo adkeeyay ammaanka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, iyadoona weli ay jiraan qaar ka mid ah beelaha kasoo jeeda gobolka Hiiraan oo weli diidan ka qeyb-galka shirkaasi, inkastoo magaaladaasi Jowhar uu haatan ka muuqda diyaargarow ku saabsan qabsoomidda shirkaas.
Ilaa iyo haatan lama oga sida ay suurto-gal ku noqon doonto qabsoomidda shirkaasi maalinta Isniinta ah ee nagu soo socoto, iyadoona badanaa wufuudii shirkaasi ka qeyb gali lahayd ay qaarkood ka maqan yihiin dalka, halka kuwa kalena ay ku sugan yihiiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.